Knitting torolalana ho an'ny Junghans-Wolle
Knitting torolalana ho an’ny Junghans-Wolle
Avy amin’ny Junghans-volon’ondry-toetra yarns, dia afaka conjure ny tsara tarehy indrindra ba akanjo ba, ba kiraro na ny tava. Ianao no manana ny safidy amin’ny kokoa noho ny nomerika torolalana ho an’ny vehivavy, ny lehilahy, na ny ankizy ny lamaody.
Vakio bebe kokoa ny Miezaka avy ny Zaza Knitting lamina sy mamorona ny mamy indrindra tapa-akanjo. Free knitting lamina sy knitting hevitra ho an’ny olon-drehetra koa ianao hahita bebe kokoa brand yarns. Jereo Azonao atao ihany koa ny ho eo anoloan’ny ny raiki-pitia instructions amin’ny brand yarns. Soso-kevitra: Ny Lamin mitovy ny volon’ondry fotsy noho ny fitarihana dia tsotra: ianao misafidy ny habeny ary izahay hanao ny Sisa.
Dia hasehoko anao mivantana ny ilaina isan’ny Baolina noho ny habeny tsy maintsy voafidy
Fanitsiana ny isa sy ny loko ny Baolina dia mazava ho azy fa azo atao amin’ny fotoana rehetra. Rehefa vita izany, toerana voafaritra iray toko miaraka amin’ny sarety, ary afaka mora foana ny filaminana. Isika dia mampahafantatra anao maimaim-poana sy tsy tapaka momba ny Vaovao sy mahaliana avy ny famoronana izao tontolo izao ny Junghans ny volon’ondry fotsy.
Manaiky ho fitaomam-panahy
← Narahi Daty Fahatsiarovana Indray Avy Eo
Raiki-pitia tamin'ny vehivavy manambady: Inona no azoko atao →